Soomaaliya oo dib u yeertey Safiirkeed fadhiya Suudaan iyo Ku-xigeenkiisa ka dib markii ay isku Garaaceen (Doc's) - Awdinle Online
Soomaaliya oo dib u yeertey Safiirkeed fadhiya Suudaan iyo Ku-xigeenkiisa ka dib markii ay isku Garaaceen (Doc’s)
February 21, 2020 (Awdinle Online) – Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa maanta u dib ugu yeertey Safiirka Soomaaliya ee Sudan iyo ku-xigeenkiisa, ka dib markii uu dagaal gacan ka hadal ah oo aad u xun uu dhex maray Safiirka iyo ku-xigeenkiisa oo lagu kala magacaabo Maxamed Sheekh Isxaaq iyo Cumaan Axmed Maxamed (Cusmaan dheere).
19 bishan February ayay aheyd markii uu dagaal gacan ka hadalka ah uu ka dhacay gudaha safaaradda gaar ahaan xafiiska safiirka, waxaana ay isku geysteen dhaawacyo waaweyn, ka dib makii ay isku garaaceen biro.
Wararka ayaan istaas kusii darayan in waayahan dambe ay dhibaatooyin dhanka wada shaqeyn la’aantah ay ka jireen labada shaqsi.
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyey in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu arintan si aad ah uga caroodey, uuna amar ku bixiyey in la soo xareeyo labadooduba, talaabna laga qaado.
Wasiirka arimaha dibadda danjire Axmed Ciise Cawad ayaa warqad deg deg u direy labadan diplomaasi oo u kacay fal ka baxsan nidaamka diplomaasiga ah.
Sidoo kale Wasiirka ayaa kusime u magacaabey Axmed Cismaaciil Xuseen oo ahaa la-taliyaha 1aad ee Safaaradda.
Lama garanaayo talaabta laga qaadi doono labadan diplomaasi nooca ay noqon doonto.
Halkan hoose ka akhriso warqadda
Previous articleAkhriso Warqadda Iscasilaadda Jeneraal Bariise oo labo Maalin ka hor aheyd
Next articleCiidanka DF oo gudaha u galay deegaan ay ku sugan yihiin Al-Shabaab